Obethunga izingubo usedayisa amakhambi abesifazane
UNKSZ Pamella Pam Madide owenza imikhiqizngamakhambi emvelo yokunakekela isitho sowesifazane sangasese eyaziwa ngeYoni, iSidima Sethu ISITHOMBE: SITHUNYELWE
Phili Mjoli | June 18, 2022
UNKSZ Pamella Pam Madide owenza imikhiqizo ngamakhambi emvelo yokunakekela isitho sowesifazane sangasese eyaziwa ngeYoni, iSidima Sethu ISsithombe: SITHUNYELWE
ITIYE elingeminye yemikhiqizo eseSidima Sethu esetshenziselwa ukugquma isitho sangasese Isithombe: SITHUNYELWE
UKWEHLA kwamakhasimende athenga imiswenko yezingubo kuholele ekutheni avule ibhizinisi elidayisa amakhambi okuhlanza isitho sangasese sabantu besifazane.
UNksz Pamella “Pam” Madide, uthi ukwanda kwezingubo ezishibhile eziphuma kwamanye amazwe ezidayiswa kuleli kuholele ekutheni angabe esakwazi ukuncintisana nezitolo ezidayisa lezi zingubo ngoba bezishibhile kunezingubo zakhe.
"Izindwangu ebengizisebenzisa mina bengizithenga ngaphandle kwakuleli bese ngiyathunga. Ukufika kwalezi zimpahla kwenze ukuthi abantu bayeke ukuthungisa bathenge lezi zingubo ezishibhile. Kulapho ngibone khona ukuthi kumele ngishintshe ukwenza ngicabange ukuthi yini enye engingayenza, kube yinto ethinta abantu abesifazane ngoba mina ibhizinisi lami ngilenzela umuntu wesifazane," kusho yena.
Uthe ubelokhu ebona kukhangiswa amakhambi aziwa ngeYoni okugqunywa ngawo isitho isangasese kodwa iningi beliwathenga esehlanganisiwe bese lifaka igama lawo lidayise. Yena uthe ubefuna into ehlukile azoyazi ukuthi ihlanganiswe kanjani ukuze kuthi uma kubuya izinkinga akwazi ukubhekana nazo.
"Ngo-2019 bengimatasatasa ngenza ucwaningo ngisizwa ngumlimi otshala amakhambi emvelo ngomquba kuphela. Bengithenga amakhambi emvelo kuye ngihlanganise bese nginikeza abantu abahlukene ukuthi bawasebenzise ukuze ngibone ukuthi le nto engicabanga ukuthi ayayenza ayenza ngempela yini," kusho yena.
Uqhube wathi: "Ngakhetha ukuthi ngihlanganise amakhambi okunakekela isitho somuntu wesifazane ngoba ngiyazi ukuthi ziningi izinkinga ezibhekene nabantu besifazane, ezinye bayesaba nokukhuluma ngazo ngoba kunenkolelo yokuthi zenziwa ukuthi umuntu wesifazane ulala nabantu abaningi."
La makhambi ehlukene abizwa ngeSidima Sethu kuwo kukhona netiye athi lilungele amantombazane asemancane. Uthe ngo-2020 ngesikhathi somvalelandlini kulapho ibhizinisi lakhe lichume khona abantu bethole isikhathi sokuzinakekela ngoba bengenzi lutho
."Impilo esiyiphilayo imatasatasa abantu abanaso isikhathi sokuzinakekela, abanye bayesaba nokukhuluma ngezinkinga zabo kanti abanayo imali yokuya kudokotela wezifo zabesifazane.
“Indaba yokugquma isitho sangasese sabantu besifazane akuyona into entsha, kudala abantu besifazane bebegquma ngo-anyanisi.
“Amakhambi ami angene esikhundleni sawo u-anyanisi futhi akuwona awokuthi ube ubhememe embhedeni kuphela kodwa awokuthi uzinakekele. Aqeda iphunga, isulumo, anciphise ukopha kakhulu kumuntu wesifazane," kusho yena.
UNkk Madide uthe unedepho lapho edayisela abadayisi bomkhiqizo wakhe, uma uzithengela wena uyakwazi ukukudayisela noma ungekho kulesi sifundazwe.